Midowga Yurub oo maanta ka shiraya arrimaha bixitaanka Britain – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Midowga Yurub oo maanta ka shiraya arrimaha bixitaanka Britain
Wasiirro matalaya 27-ka dal ee ka sii mid ahaanaya Midowga Yurub kaddib markii Britain ay isaga baxday MIdowga ayaa maanta gelinka dambe ku kulmi doona magaalada Brussels si ay isugu afgartaan nidaamka ay u marayaan wadaxaajoodka xilliga kala guurka ee xigi doona bixitaanka UK.
Waa wareeggii koobaad ee wadaxaajood sidaa u heersarreeya oo sanadkan la yeelanayo, wasiiraddana waxaa la filayaa inay hagaan dadka wadahadallada ku matalaya Midowga Yurub si ay u soo jeediyaan shuruucda ay tahay in UK ay raacdo iyo qaanuunka u degsan suuqa uu ku midaysan Midowga Yurub iyo kastamyada ilaa xilliga kala guurka uu dhammaanayo.
Tan iyo markii UK ay ka soo gudubtay waqtigii kama dambeysta ahaa ee loo qabtay ee dabayaaqadii bishii Diseembar ee ay aheyd inay horumar ku filan ka sameyso wadahallada ay uga baxayso Midowga Yurub, ayaa hannaanka ay wax ku socdaan waxaa mar qura laga qariyay bulshada.
Laabkacsanaantaasi ayaa maanta soo gebagaboobi doonto markaas oo wasiirrada Midowga Yurub ay isku raaci doonaan nidaamka ay marayaan xilliga kala guurka taas oo ay xigi doonto gebagabada xubinnimada Britain ee Midowga Yurub, ee bisha Maarso ee sanadka soo socda.
Wasiirrada 27-ka ah ee Midowga Yurub ayaa iska dhegatiri doona doodda siyaasadeed ee cakiran ee Britain ee ku saabsan shuruudaha kabixitaanka Midowga ayna ku dheganaadaan habka maamul ee ay iyagu doorbidayaan.
UK waxaa la siin doonaa tan iyo Diseebarta 2020-ka si mudadaas ay u raacdo shuruucda suuqa ay ku midaysan yihiin Midowga Yurub iyo kastamyada, taas oo ay ka mid tahay isu socodka xorta ah ee dadka.
Rasmiyan Britain mudadaasi waxa ay waayaysaa xaqii ay u laheyd codeynta halka dhanka kalana ay sii ahaan doonto dal ku dhaw xubinnimada Midowga Yurub.
Hannaanka oo dhanna waxa uu ku xirnaan doonaa sida wasiirrada Midowga Yurub ee 27-ka ah ay u dhigaan qorshaha wadaxaajoodka ee xilliga kala guurka.
← Trump oo ka xumaaday Clinton oo akhrisay buugga laga qorey isaga
Australia oo labo jibaaraysa samaynta hubka →